Japana: Rehefa tsy salama ramatoa vadinao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Novambra 2009 8:05 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Swahili, Español, বাংলা, русский, English
Rehefa mifandona ny kolontsaina Japonein'ny “vahoakan'ny orinasa” (社蓄 shachiku) sy ny soatoavina ary ny lanjan'ny fanambadiana – maherin'ny 300 no olona namaly an'ity fanontaniana ity tao amin'ilay “forum” goavana Hatsugen Komachi: Tokony hijanona tsy hiasa ve ny lehilahy rehefa marary ny vadiny?
Nivady nandritra ny 8 taona i Rina ary manan-janaka vavy mianatra amin'ny taona fahasivy. Eo an-dalam-pisaraham-panambadiana izy izao ary mitantara ampahany vao haingana tamin'ny fiainam-panambadiany izay niraikitra tao an-tsainy nanomboka tamin'izay.
Fony mbola zaza ny zanany vavy, nihareraka i Rina satria tsy ampy torimaso noho ny tomanin-janany isan-kalina. Nanavy be izy ary tsy afaka nikarakara ny zanany vavy nefa tsy nety nangataka andro tsy iasàna nefa andraisana karama, na hody alohan'ny mahazatra ny vadiny. Diso fanantenana tokoa i Rina satria tsy mba niantso akory aza ingahy rainy. Roa volana vao nihatsara ny fahasalamany ary tsy mety hadinony mihitsy ny tsy nanampian'ny vadiny azy na dia kely akory aza.
Amina tranga toy itony, tia tena ve aho raha mangataka amin'ny vadiko farafaharatsiny mba hody aloha fa tsy hanao ora ambony ampanga, rehefa tsy nagataka andro tsy iasàna ihany izy? Manao ahoana ny tokantranonareo? Mijanona tsy miasa ve ny vadinareo mba hikarakara ireo ankizy rehefa marary ny vehivavy? Misy lehilahy ve ao amin'ny toeram-piasànareo mijanona tsy miasa satria marary ny vadiny?
Avy hatrany dia maro ireo reny efa “za-draharaha” namoaka ny tantaram-piainany nandritra ny fotoana naharariany nefa mbola tsy maintsy miarina ihany mikarakara tena sy ireo ankizy, fa ny vadin'izy ireo tsy mba manampy – tsy hoe nanantena na nila fanampiana avy aminy koa izy ireo.
‘Manam-bady ary manan-janaka roa’ dia niteny:
インフルエンザで寝込んでいるときも、４０度の熱が三日間下がらない時も、一週間３８度から熱が下がらずいた時も夫に休ん で欲しいと思ったことはありませんでした。夫の職種が営業だったので客先と約束があれば休めないのも仕方がないし、客先と急に約束が入ったら帰れないのも 仕方がないので。会社に勤めてお給料を頂いている以上会社に損害を与えるような休暇をとれないのは当たり前。
Na dia tao am-pandriana noho ny gripa aza aho, na nanana maripàna 40° nandritra ny telo andro misesy, na 38° mandritra ny herinandro iray manontolo, tsy mbola nandalo tato an-tsaiko mihitsy ny hangataka ny vadiko hijanona ao an-trano. Miasa eo amin'ny sehatra varotra izy ka mila mihaona amin'ireo mpanjifa ary tsy maintsy miasa alina raha misy ny tena tsy maintsy ifanampiana. Rariny amiko raha hoe mandray karama ny olona iray ka tsy afaka maka andro tsy hiasàna mety hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny orinasa iasany. Tsy dia fantatro loatra ny asan'ny vadinao, fa zavatra roa samy hafa ny hoe izy marary sy ny hoe olona iray ao an-tokatrano marary. Tsy mino aho hoe misy vehivavy mangataka ny vadiny hampiato ny asany noho izy hoe marary fotsiny. Inona no hevitrao?
Miri dia miteny fa tokony hojerena koa ny toeran- [lazan-]drangahy vadinao.
Miankina amin'ny asa ataon'ny vadinao io, nefa ny hiato tampoka amin'ny asa dia matetika miteraka olana maro ho an'ny mpiara-miasa amin'io lehilahy io sy ny mpanjifany. Ny tsy fahampian'ny fikarakarànao (ara-pahasalamàna) ny tenanao dia manimba ny lazan'ny vadinao amin'ny fiterahana olana ho an'ny orinasa iasany. Tsy eritreretiko ho manara-penitra loatra ho an'ny lehilahy ny mampiato ny asany satria marary ny vadiny, raha tsy hoe mila fidirana hopitaly angaha. Raha izaho dia aleoko maka mpitsabo mpanampy na mpikarakara manokana.
Mahatsiahy ny zava-niainany nitovitovy tamin'izany i Ranomaso [Teardrop]. Nandeha nisotrosotro niaraka tamin'ny mpiara-miasa aminy ny vadiny nefa izy marary, ka niteraka ady be.
Ny tena nahazendana ahy [mihoatra lavitra ny hoe nandehanany nisotrosotro] dia ny fihetsik'ireo vehivavy namako! Hoy izy ireo “Izany fotsiny ve no mahatezitra anao? Mbola loza lavitra àry ny ahy!” Tsaroako ny nieritreritra hoe tena mampalahelo fa lasa zatra amin'izany fanaovana tsinontsinona izany ireto vehivavy ka na ny fisainany aza lasa donto.
Taona vitsivitsy izao no lasa nanomboka tamin'izay… ary maizina (donto) tanteraka ny fisainako.
Miteny i Kanon fa maneho ny fitiavany amin'ny fomba hafa mihitsy ny vadiny.
Raha eritreretiko ny habetsahan'ny asa ataon'ny vadiko sy ny toerana misy azy ao amin'ny orinasa dia tsy afaka hiteny mihitsy aho hoe “Mba modia aloha fa tsy dia salama loatra aho izany!”. Rehefa marary aho dia any amin'ny trano fisakafoanana izy no mihinan-kanina hariva. Ividianany zava-pisotro mampatanjaka vita anaty boaty eny amin'ny milina mibaiko tena eny amin'ny tobin'ny fiarandalamby aho. Amiko, vady mikarakara izy matoa manao izany.
Miteny i ‘Kengyo-shufu’ (mpiasa mpikarakara tokantrano) :
Ireny dia teny avy amin'ny olona tsy mbola tena niasa. Amiko dia te-hijanona ao an-trano ny vadinao, nefa tsy afa-manoatra.
Olana any amina orinasa Japoney maro ny fahasarotan'ny fakàn'ireo mpiasa andro tsy hiasàna, fa ny marina dia hoe tsy afaka mijanona fotsiny izy.
Mitsetra ny sasany, toa an'i nabe.
Rina, marina ny teneninao. Tsy fitiavan-tena mihitsy izany! Mijanona tsy miasa aho rehefa marary ny vadiko. […] Efa dila ny vanim-potoana nandaozan'ireo lehilahy ny vadiny marary. Ankehitriny, tokony manambatra hery isika sady miaro ny fidiram-bolantsika.
Gaga amin'ny fahasiahan'ny rehetra i Pochi, ary manontany ankolaka raha miasa 15 hatramin'ny 16 ora isan'andro izy ireo mandavan-taona.
家族がせっぱつまった状態のときに、仕事のほうがどうにか都合がつきそうだったら、少々遅刻して病院につれていくとか、コ ンビニで食料を調達するとか、残業はせずに急いで帰ってくるとかするのは社会人失格？頭から「休めるわけない！！」と決めつけるのは、ストイックな姿を会 社の人に見せたいから？自分の楽しみのために有給をとることもあるでしょう。（有給をとって友人とゴルフにいく上司をなんども見てます）
Raha mitondra olona iray ao anatin'ny fianakaviana ho any amin'ny hopitaly aho ka tara ora vitsivitsy vao tonga, mividy sakafo any amin'ny tranom-barotra ho an'izany, na maika ny hody fa tsy manao ora ambony ampanga rehefa mba misy ny azo anaovana izany, izany ve no hadika fa tsy tena ao anatin'ilay fiarahamonina (sosaiety) aho? Te-hiteny mialoha ve ianao fa “Tsy misy fomba hakako andro tsy hiasàna mihitsy!” satria te-hampiseho amin'ireo mpiara-miasa ianao fa tena mahery fo?
Misy ny olona maka andro tsy fiasàna andraisam-bola noho ny rendrarendra, sa tsy izany? (Efa im-betsaka aho no nahita tale naka andro tsy fiasàna andraisam-bola mba handehanana hilalao ‘golf’ miaraka amin'ny namany.)
Tokumei dia miteny fa miankina amin'ny hasarotan'ny aretinao io ary hoy izy manohy:
Hankalaza ny faha-25 taonan'ny mariaziko aho atsy ho atsy ary azoko lazaina anao fa ny fomba hananana fiainam-panambadiana mamy dia ny tsy manantena be avy amin'ny ankilany. Raha tsy manantena izany ianao dia hahafaly anao ny hetsika fanehoam-pitiavana faran'ny bitika indrindra. Mba toro-hevitra iny rehefa hiverina hanambady ianao.
Ity ny toro-hevitr'i Echika:
Tsy dia nanan-kevitra be amin'ny lehilahy maka andro tsy iasàna ho an'ny olam-pianakaviana ny lehibeko. Ny ataoko dia ny miteny any am-piasàna fa marary aho dia mijanona any an-trano aho mikarakara ny vadiko.
Miteny i ‘Usuaji’ fa tsy azony atao izany any amin'ny oriasa iasàny.
Ao anatin'izany rehetra izany, mitehaka ny herim-ponao nifidy ny fisaraham-panambadiana aho, toy izay handany ny andronao sisa amin-drangahy vadinao be taraina.
Manahiran-tsaina izany hoy Nya saingy tsy àry ho takatry ny lehilahy veroka foana izay tadiavin'ireo vehivavy, raha tsy hoe efa voafaritra mialoha angaha.
Maro amin'ny lehilahy no hilaza hoe “Dia efa hisakafo mialohan'ny hodiana aho satria tsy maintsy ho sahirana ianao hahandro sakafo”. Toa tsy ao an-tsain'izy ireo velively ny hoe mba mila mihinana koa anie ilay ramatoa vadiny tsy salama. Mety hahasadaikatra anao nefa tsy maintsy miteny aminy ianao “Tsy afaka hahandro aho anio ka azafady mba ividiano an'itsy sy iroa ho ahy”. Raha zareo no avelanao hifidy, dia ireny sakafo be menaka tonga dia raisina sy ny toy izany ireny no ho entiny.
Tsara ny anamarihana fa Hatsugen Komachi dia tena mitodika betsaka amin'ireo vehivavy na dia ny vehivavy mikarakara tokantrano aza. Ny tena lehibe amin'ity tantara ity dia ny mahita fa ny fanehoan-kevitra avy ao amin'ny Hatena, firaisa-monina mirona betsaka amin'ny lehilahy, dia tena hafa tanteraka mihitsy, (Eto ambonin'ny tany, tsy misy asa manan-danja indrindra noho ny fandraisako an-tànana ny fahasalamako sy ny an'ny fianakaviako. 自分、もしくは家族の健康にも優先する仕事なんてこの世に一つもない。) tsy misy hafa amin'ny fifanakalozan-kevitra tao amin'ilay vohikala matihanina SNS LinkedIn (Ilàna solonarana ny fidirana ao: Ataon'ny Bevozona (mpanao afera) Japoney sorona hatramin'ny ankohonany) saingy mbola tantara ho amin'ny andro hafa indray ny amin'izay.